သင်ဘယ်လိုသိသောအတီထွင်မှု၏အင်တာနက်အပြာကားနှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအရွယ်ရောက်ပြီးမဂ္ဂဇင်းနှင့်အပြာကားလာသည်ဟုအတွက်ဓာတ်ပုံနဲ့အလတ်စား? ကောင်းစွာ၊ဖွင့်ဖို့အကြောင်းနောက်တဖန်အဖြစ်ပျက်၊ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အကြမ်းဖက်ကြမည်ဖြစ်ဂန္ထဝင်အခမဲ့လိင်ပြွန်နှင့်လူသတ်သမားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုက်ကဲ့သို့သောလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း၊ဘယ်မှာအားလုံးစိတ်ကူးယဉ်လမ်းထက်ပိုအပြန်အလှန်နှင့်ငြိ။, ဒါဟာဖို့အချိန်င့်အတွေ့အကြုံညမ်းသောထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်၊အတုပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသင်စူးစမ်းအပေါင်းတို့၏သင့်ရဲ့လိင်စိတ်၊နှင့်အတူဂိမ်းမသာကြောင်းအင်္ဂါတချို့၏အပူဆုံးဖြစ်သေား၊ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကြိုက်ပေါ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရသာအတွက်ယောက်ျားနှင့်လိင်။
အများအပြားရှိစေခြင်းငှါဒုတိယအကြံအစည်နှင့်ပတ်သက်ညမ်းဂိမ်းများ၊နားလည်နိုင်မယ့်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း၊အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတော်တော် rudimental။ အရင္းအတွက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်သူတို့ခံစားခဲ့ရပိုကြိုက်ကာတွန်းမဲ့အစားထက်အမှန်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံ။ ကောင်းစွာ၊ကြောင်းအပြောင်းအလဲအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သောကြောင့်၊သာတူလာ HTML၅ ဂိမ်း၊နှင့်သင်မသိရပါဘူးအဘယျသို့ဤသည်များမှာ၊သူတို့လာမယ့်မျိုးဆက်၏အမာခံလိင်ဂိမ်းများ။ ဒီဂိမ်းဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လွတ်လပ်မှု။, သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မင်းစာသို့သော်သင်သည်ချင်တယ်၊နှင့်သင်မည်လည်းပြောင်းလဲနိုင်ရာများစွာကသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ အဆိုပါဂိမ်းဖြစ်လာပိုမိုရှုပ်ထွေးတော့ကိုယ့်အမှတ်--နှိပ်ပါ။ သင်အကယ်စင်စစ်ရှာဖွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲလန်းသောအရေးယူ၊အမလိုအစဉ်ထားခဲ့။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်အားလုံးသည်ဤဂိမ်းနှင့်မြေတပြင်လုံးအတွေ့အကြုံများအတွက်အခမဲ့နှင့်အတူပူးတွဲပါအဘယ်သူမျှမကြိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုပလက်ဖောင်းအောက်!
ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးစုဆောင်းမှုများလိင်ညစ်ညမ်းသောပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်ကြောင်း၏ယူခြင်းအားဖြင့်အားလုံးအမျိုးအစားများချွတ်အကြီးအခမဲ့လိင်ပြွန်ပြီးတော့အဘို့အရှာနေသောဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်သူတို့အားကြောင်ဖြစ်သေား။ ငါတို့သည်လည်းအမျိုးအစားများရှိနေကြောင်းတိကျသောလိင်တူဂိမ်းကစား။
လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်များမှာလိင် simulators။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းသည်လိုခံစား POV၊လိင်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းသင်အများအားဖြင့်ကစားတစ်ဦးအဖြစ်၊ထိပ်စုတ်အ asses နှင့်ရင်ဆိုင်နေရ၏ဇာတ်ကောင်အကြောင်းသင်ရလိမ့်မယ်စိတ်ကြိုက်။ သို့သော်၊သင်သည်လည်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်ကစားရန်အဖြစ်အောက်တွင်၊အချို့ဂိမ်းများအကြောင်းကိုသင်ရပါလိမ့်မယ်သ၏အချို့အများဆုံးချောမောယောက်ျားတွေအတွက်အင်တာနက်။
သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့တူပိုပြီးခံစားရမယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ထိုအခါကိုသင်မှမသွားသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိကြလိင်ဂိမ်းစုဆောင်း။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အပူဆုံးလိင်ချိန်းတွေ့ simulators အတွက်၊သင်ခံစားနိုင်သည့်အပြန်အလှန်အမျိုးမျိုး၏ဇာတ်ကောင်၊အားလုံးကြွလာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်။ သို့သော်အချို့ဤဂိမ်းများလိမ့်မည်လည်းသင်သပ္မႈမ်ားျပဳဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ၊ရှာဖှေနှင့်မစ်ရှင်သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဖြည့်စွက်ရန်အဘို့အသော့သစ်လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ဇာတ်ကောင်။
ကျွန်တော်ပင်ပြက်လိင်ဂိမ်းများ၊အရာအတွက်မှရလိမ့်မယ်မင်းအမျိုးမျိုး၏ဇာတ်ကောင်ကနေရုပ်ရှင်၊ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကာတွန်း၊သူ reimagined အဖြစ်လိင်။ သင်ပင်မင်းတြန္းယောက်ျားလေးများအတွက်အလိုးလိင်ဂိမ်းများငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ အားလုံးအားလုံးအတွက်၊ကျနော်တို့လာမယ့်အတူလိုအပ်သမျှအဘို့အတစ်ပျော်စရာအချိန်အပေါ်။ ပြီးရှိပါတယ်အများကြီးပိုဤအစု။ ရုံစူးစမ်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပူဇော်။
လိုအပ်မည်မဟုတ်ဘာမှလုပ်ခင်ကစားဤဂိမ်း။ အရာအားလုံးခဲ့၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ လမ်းမရှိသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်များအတွက်လက်လှမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ထက်အခြားအတည္ျကျော်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်။ အဆိုပါဂိမ်းများအားလုံးကိုကစားတိုက်ရိုက်အတွက်ငွေကြေးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများဖြစ်ကြဝှက်ထားကြောင်းဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအစဉျမသိရကြလိမ့်မည်သူကိုသင်စဉ်မွေ့လျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံဂိမ်းများ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတောင်းမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ထံမှသင်။